बालुवा उत्खननका कारण ककनीको कोल्पुमा एक किशोरी र एक महिलाको ज्यान गयो (तस्विर) « Sajha Page
August 18, 2019 Sun
बालुवा उत्खननका कारण ककनीको कोल्पुमा एक किशोरी र एक महिलाको ज्यान गयो (तस्विर)
प्रकाशित मिति: August 13, 2019
नुवाकोट, २८ साउन । ककनी गाउँपालिकाको कोल्पु खोलामा खाल्डोमा डुबेर दुई जनाको ज्यान गएको छ । स्थानीय खोलामा बालुवा उत्खनन गरेर छाडेको खाल्डोमा डुबेर दुई जनाको ज्यान गएको हो ।
नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित कोल्पु खोलामा डुबेर ज्यान गुमाएका मध्ये एक जना स्थानीय १३ बर्षकी बिनिता बलामी रहेकी छिन् । यस्तै अर्को सिन्धुली जिल्ला फिक्कल गाउँपालिकाकी ३५ बर्षिय लक्ष्मी तामाङ रहेकी छिन् ।
बिनिता बलामी नुहाउन जाने क्रममा बालुवा झिकेको खाल्डोमा परेर डुबेकी थिईन् । उनलाई बचाउन सँगै रहेकी लक्ष्मी तामाङ पनि बचाउने क्रममा डुेबको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयहरुले बताएका छन् । गाउँपालिका र वडा कार्यालयकै मिलेमतोमा बालुवा उत्खनन् कार्य हुदै आएको थियो ।
ज्यान गुमाएका दुई शबलाई वालुका उत्खनन् गर्ने ब्यक्ति मोहन कृष्ण श्रेष्ठको बालुवा भण्डारण र स्काभेटरसँगै राखेर प्रदर्शन जारी राखेको छ । खोलामा बालुवा झिक्न नपाउने माग सहित स्थानीयले प्रशासन र वडा कार्यालयको विरोध गरिरहेको छ ।
सोबार साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटको उक्त घटनालाई लिएर यतिखेर कोल्पुखोलामा तानावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग सहित बालुवा उत्खनन् कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय प्रशासनका अनुसार वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ बलामी सहितको स्काभेटरहरुले बालुवा उत्खनन् गर्दै आईरहेको बुझिएको छ । घटना घटेको ठाउँमा स्थानीय मोहनकृष्ण श्रेष्ठले बालुवा उत्खनन् गर्दै आईरहेका छन् । उनको स्काभेटरमा भने स्थानीयले कुनै क्षति पु¥याएका छैनन् । घटनाको ज्जिमा मोहनकृष्ण श्रेष्ठले नलिएसम्म शब नबुझ्ने भन्दै अहिले विरोध भईरहेको स्थानीय दिपक बलामीले घटनास्थलबाट जानकारी दिएका छन् ।
गाउँपालिका र वडाकै मिलेमतोमा बालुवा उत्खनन्
नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित कोल्पुखोलामा बालुवा निकाल्ने काम १ बर्षदेखी निरन्तर हुुदै आएको छ । बर्षायाम भन्दा अघि स्थानीय डाँडाँकाडाँमा स्काभेटर लगाएर बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य गरेको ठेकेदारहरुले बर्षायाम शुरु भएदेखी नै कोल्पु खोलाको ठाउँ ठाउँमा बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन् । पटक पटक प्रशासनले यसमा रोक लगाउन खोजेपनि अतेरी भएको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले बताएका छन् ।
वडा अध्यक्षको दुई वटा स्कोभेटर छ । दुई वटा स्काभेटरले दिनको २० औं टिप बालुवा वडा अध्यक्षले किाल्नछन्, स्थानीयले बताए । यस्तै वडा अध्यक्ष नै यस्तो कार्यमा लागेपछि अरुले किन नगरोस् । वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाले कमिशनको चक्करमा लापरवाही गरेको आरोप स्थानीयहरुको छ ।
वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर बलामीको २ वटा स्काभेटर सहित अहिले कोल्पु खोलामा ७०० मिटको बीचमा १० वटा भन्दा बढि स्काभेटर प्रयोग भईरहेको छ । ५०० घरदुरी रहेको गाउँको स्थानीयहरु नुहाउन खोलामा जाने गर्दछन् । त्यहि क्रममा मानवीय क्षति हुने खालको घटनाहरु भएकोले तत्काल बालुवा उत्खनन् कार्य बन्द हुनुपर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको छ ।
पाँच महीनामा २७ लाख जरिवाना असुल
काठमाडौँ, २६ चैत । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीबाट पछिल्ला पाँच महीनामा रु २७ लाख जरिवाना असुल गरेको छ ।
लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य आज पनि बढ्यो !
काठमाडौँ, २६ चैत्र । नेपाली बजारमा आइतबार यता लगातार बढिरहेको सुनचाँदीको मुल्या आज मंगलबार पनि बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी
काठमाडौँ, २६ चैत। लगातार उकालो लागेको शेयर बजारमा आज भने शेयरको मूल्य दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा दैनिक सवा करोड घाटा
काठमाडौँ, २ पुस । राष्ट्रिय गौरवको सबै भन्दा ठुलो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा
मलाई जेल हाल भन्दै उफ्रिए रमेश प्रसाई, पोखरामा रबिको समर्थकले सालिकरामलाई न्याय मागे (भिडियो)
लास देख्दा नै बे*होस्, घाँटी काटेर ३ टुक्रा, झाडीमा लगेर विभत्स ह*त्या (भिडियो)
पोखराको न्यूरोड तनावग्रस्त, भिषण आगो लाग्दा निभाउनै कठिन (भिडियो)
अञ्जलीसंग मेरो पहिलो यौन सम्भोग (यौन कथा)
सित्तैमा अमेरिका जाने हो ? आजबाट डिभी आवेदन खुल्ला, यस्तो छ नयाँ नियम (घर मै बसेर फाराम भर्ने तरिका सहित)
उडुसले सताएर हैरान हुनु भएको छ ? हेर्नुहोस उडुस भगाउने घरेलु उपायहरु यस्ता छन (सक्दो शेयर गरौ)
तपाइको हातमा कति चक्र र शंख छन? हस्तरेखा विज्ञानले के भन्छ? जानी राखौ !!
विदेश जानु अघि एकपटक अवश्य ‘भीजा’को प्रकार बारे जानकारी राख्नुहोस्
परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परिक्षाको मुखैमा एसईई दिने विद्यार्थीको लागि दियो खुसिको खबर : नमुना प्रश्नपत्र सहित जानकारी लिनुहोस । सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौ
यो हो मुर्दा शहर जहाँ मानिस पुगेपछि फर्केर कहिलै आउँदैनन्
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड कालीखोलामा यात्रुबाहक बस पहिरोले बगायो, जिप पुरियो
अमेरिकाको सपनाले काठमाडौँको मनमैजुमा रहेको सुबिधा सम्पन्न घरका मालिक अहिले बने ज्यामी (भिडियो हेर्नुहोस)
संचालक तथा सम्पादक : जिवन राई, सूचना बिभाग दर्ता नं : १९४/०७५/७६, ठेगाना: ठेचो, ललितपुर, फोन : ९८५१२०६४९१, इमेल : [email protected],